Oovimba be-ETH/USD-Funda ukurhweba
tag: ETH / USD
U-Ethereum ujongene noKwaliwa kwi-2,700 yeedola eziPhakamileyo, ngoMeyi uBuyisele i-Uptrend
Ukuhlaziywa: 26 January 2022
I-Ethereum iyancipha ukuya kwi-$ 2,160 ephantsi
I-altcoin iphinda ibuyele kwi-bullish
Ixabiso langoku: $ 2,628.95
Intengo yeNtengiso: $ 313,075,983,129
Umthamo wokuThengisa: $ 18,479,573,972
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngoJanuwari 26, 2022
NgoJanuwari 24, I-Ethereum (i-ETH) ixabiso liye lehla laya kutsho kwi-2,160 yeedola kodwa linokuthi liqalise ukunyuka. I-altcoin enkulu ifumene inkxaso ngaphezu kwe-2,400 yeedola njengoko iphinde yaqala phezulu. Ukunyuka okuphezulu kufikelele kwi-2,668 yeedola kodwa kwachaswa kwindawo yokumelana ne-2,700 yeedola. I-Ether ngoku ibuyela kwicala elisezantsi. Mhlawumbi imakethi iya kuphinda ibuyele ezantsi kwe-2,540 yeedola ngaphambi kokuphinda iqalise ngokutsha.
I-Ether ingaphantsi kwe-32% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-altcoin enkulu kunazo zonke yayingaphambili kwindawo ethengiswa kakhulu kwimarike. Abathengi bavela kummandla othengiswe kakhulu ukunyusela amaxabiso phezulu. Ixabiso le-Ether lingaphantsi kwe-80% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-Ether ibuyisela umva ngenxa yokuba imarike ifike kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-50 yeentsuku ze-SMA zithambekele ngasezantsi zibonisa ukuhla.
I-ETH/USD ibuyisela umva emva kokukhatywa ukusuka kwi-2,700 yeedola eziphezulu kodwa inokuphinda iqalise ukunyuka. Okwangoku, ngoJanuwari 24 uptrend, i-candle body retraceed ivavanye i-61.8% ye-Fibonacci ye-retracement level. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-ETH iya kunyuka kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extension okanye i-$ 2,422.94 okanye i-$ 2,668.
ETH / USD - 1 Itshathi yeYure
I-Ethereum ifikelela kwi-Bearish edinweyo, inokuthi iqalise kwakhona i-Uptrend ngaphezulu kwe-2,400 yeedola
Ukuhlaziywa: 23 January 2022
I-Ethereum ifikelela kwindawo ethengiswa kakhulu
I-altcoin iyancipha ukuya kwi-$ 2,300 ephantsi
Ixabiso langoku: $ 2,429.40
Intengo yeNtengiso: $ 289,777,538,348
Umthamo wokuThengisa: $ 19,975,243,748
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngoJanuwari 23, 2022
Ixabiso le-Ethereum (ETH) yehle kakhulu yaya kutsho ngaphantsi kwe-2,301 yeedola kodwa inokuphinda iqalise ukunyukela ngaphezulu kwe-2,400 yeedola. Ixabiso le-Etere lilungiswe phezulu kodwa liyachaswa kwi-2,600 yeedola eziphezulu. Okwangoku, ijikeleza ngaphezulu kwenkxaso yeedola ezingama-2,300. Kwiiyure ezingama-48 ezidlulileyo, i-Ether iye yatshintsha phakathi kwe-$ 2,300 kunye ne-$ 2,600 yamanqanaba exabiso. Kwi-downside, ukuba iibhere ziphuka ngaphantsi kwe-$ 2,300 inkxaso, imarike iya kuncipha ukuya kwi-$ 2.050 okanye i-$ 1,721 ephantsi. Ngakolunye uhlangothi, ukuba iinkunzi zeenkomo ziphule ngaphezu kweedola ze-2,600 eziphezulu, u-Ether uya kukhwela i-$ 3,450 ephezulu. I-crypto inokwenzeka ukuba iphinde iqale phezulu njengoko kukho izibane ze-bullish ngaphezulu kwenkxaso yangoku.
I-Ether ingaphantsi kwe-20% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ifikelele kwindawo ethengisiweyo. Izibane ze-bullish ngaphezu kwe-2,300 yenkxaso yenkxaso ibonisa ukunyuka okunokwenzeka. Abathengi kulindeleke ukuba bavele kwindawo ethengisiweyo. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-50 yeentsuku ze-SMA zithambekele ngasezantsi zibonisa ukuhla. Ixabiso le-crypto lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezibonisa i-downtrend.
I-ETH/USD ikwinyathelo eliya ezantsi kodwa inokuphinda iqalise ukunyuka ngaphezulu kwe-2,400 yeedola. Intshukumo eyongezelelekileyo yokuhla ayinakwenzeka. Okwangoku, ngo-Januwari 10 downtrend, umzimba wekhandlela oye waphinda wavavanya i-78.6% ye-Fibonacci ye-retracement level. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-ETH iya kuwela kwinqanaba le-1.272 isandiso seFibonacci okanye i-$ 2,422.94.
← Entsha izithuba1 2 ... 17 abaDala izithuba →